Muxuu Mourinho Ka Yiri Kulanka Uu Ka Horimaanaya Kooxdiisa Hore Ee Chelsea & Sababta Ugu Wacan Inay Hogaamiyaan Horyaalka Xilli Ciyaareekan? - Wargane News
Home Sports Muxuu Mourinho Ka Yiri Kulanka Uu Ka Horimaanaya Kooxdiisa Hore Ee Chelsea...
Jose Mourinho ayaa shirkiisa jaraa’id ee maanta waxa uu kaga hadlay kulanka ay la ciyaarayaan Chelsea ee Old Trafford ee horyaalka Premier League, isagoo shaaca ka qaaday in caaboonaanta Chelsea iyo daalka United ay ugu wacan tahay farqiga u dhaxeeya labada kooxood xilli ciyaareedkan madaama Chelsea ay ka maqan tahay tartamada Yurub.
“Marka ugu horeysay, raga qaar waa ku caaboon, qaarna waa kuwa daalan, taasno muhim weyn ayay ka tahay kubada cagta” ayuu yiri Mourinho.
“Laakiin sababo qaar Chelsea waxa ay hogaaminayaan horyaalka. Kaliyana ma ahan inay yihiin kuwa caaboon.
“Waxaa sidoo kale sabab u ah inay heystaan shaqsiyaad tayo leh, waxaana ay heystaan koox wadar ahaan tayaysan.
“Waxa ay u ciyaaraan qaab gaar ah, waa ay ku dhegeen, si fiican ayayna u ciyaaraan.
“Koox walba kuma difaacgasho 11 ciyaartoy, waxay iyagana ku difaactamaan 11 ciyaartoy.
“Koox walba ma ahan kuwa u heelan kubadaha rogaalceliska ah.
“Halis ayay ku yihiin kubadaha rogaal celiska ah, waxaana ay heystaan shaqsiyaad xalin kara dhibaatooyinkooda, sidaasi darteed waa koox aad u xoogan.”
Mourinho ayaa ka horimaanaya kooxdiisa hore ee Chelsea mar kale iyadoo kulankii Stamford Bridge ay isku dhaceen jamaahiirtii uu mar geesi u ahaan jiray, kuwaasoo ku heesayay inuu yahay qiyaanoole labo wajiile ah, laakiin Mourinho ayaa markaas kaga jawaab celiyay isagoo seddex far kor u taagan islamarkaana tixraac ka dhiganaya inuu seddex horyaal u qaaday.
Waxa uu haatan sheegay in kulanka uu ka horyimaanayo Chelsea ee Old Trafford inuusan u aheyd kulan gaar ah oo qiiro leh.
“Waxaad tiri ereygaas ah dareen” ayuu yiri Mourinho. “Aniga ahaan, kaliya waa ciyaar. Waa ciyaar kale. Wax kala duwanaansho ah iima sameyneyso.”
Somaliland: Judges should speed up cases which have accumulated in the courts-Chief Justice
Somaliland: Cirro Iyo Muuse Oo Noqon Doona Tartanka Doorashadda Siilaanyo Oo Daadihin Doona Muse Iyo Xulashada Cirro Ee Ku Xigeenkiisa
Dag Dag: Inter Milan Oo Dalbanaysa Ciyaaryahanada Rafinha iyo Barcelona
Sida ay noqon karto shaxda Real Madrid hadii uu ka tago Ronaldo